Eto ny kinova farany an'ny OS X, te hifaninana amin'ny MacBook i Xiaomi, ny Apple Pay mavitrika any Frantsa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac | Avy amin'ny mac aho
Tonga ny kinova farany an'ny OS X, te hifaninana amin'ny MacBook i Xiaomi, ny Apple Pay mavitrika any Frantsa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Pedro Rodas | | Apple Music, Apple Pay, About us, Solosaina Mac, OS X El Capitan, Apple products
Herinandro iray hafa dia tonga ny fanangonana vaovao izay andrasanao. Raha tsy afaka namaky anay nandritra ny herinandro ianao na te-hamelombelona ny zava-nitranga rehetra manodidina ny paoma manaikitra, Ao amin'ny Soy de Mac no nanomananay ny fanangonana farany ny volana Jolay.
Ny marina dia na eo aza ny fotoanan'ny fialantsasatra ho an'ny maro, ny an'ny Cupertino dia manohy ny gadona asa efa nahazatra antsika ary izany dia ny fankalazana ny herinandro amin'ity herinandro ity. Andao atomboka amin'ny fanangonana vaovao.
Izahay no mijanona voalohany amin'ny vaovao niresaka tamin'ity herinandro ity Apple dia namoaka ny kinova farany an'ny OS X, kinova 10.11.6, kinova izay manitsy tsotra izao ny lesoka, manao fikojakojana ny fitaovana sasany ary manatsara ny fahombiazana, ao anatin'ny inona no mifanaraka. Raisina an-tsaina fa amin'ny volana septambra dia rehefa hamoaka ny vaovao i Apple macOS Sierra, kinova 10.11.6 izay horesahintsika ato amin'ity lahatsoratra ity no ho andrasana farany amin'ity rafitra ity ary Apple izany hanidy ny programa izy io raha hanary ao amin'ny macOS Sierra vaovao.
Andro vitsivitsy taty aoriana dia tonga ny stomping tena mahery vaika, nanondro fa, farany, Tonga tany France i Apple Pay. Io ilay firenena sisa navoakan'ny telo noresahin'izy ireo tamin'ny teny ifotoran'ny WWDC farany tamin'ny volana Jona sy ny firenena manodidina antsika Efa azonao atao ny mandoa vola amin'ny alàlan'ity fomba fandoavam-bola Apple Pay ity. Izao ny zavatra tsy maintsy jerentsika dia ireo firenena iza avy no hanana an'ity rafitra fandoavam-bola mavitrika sy azo antoka ity.
Efa naheno momba ny laptop tadiavinao ve ianao? ento eny amin'ny tsena Xiaomi? Ho an'izay liana indrindra amin'ny vokatra isan-taona dia manolotra ny marika sinoa Xiaomi, tsy ho gaga ianao raha milaza izany aho "Saika ny fitaovan'ny marika rehetra dia avy amin'ny tsindrimandry avy amin'i Apple". Toy ny orinasa maro hafa, ny vokatra paoma dia manome aingam-panahy sy mitondra ny orinasa teknolojia ankehitriny. Amin'ity indray mitoraka ity, Xiaomi dia tsy hanolotra clone hafa an'ny iPhone. Fa kosa, navoaka an-tsokosoko fa ny orinasa dia handefa ny mitovy aminy amin'ny Apple's 12 ″ MacBook, araka ny pitsopitsony efa fantatra.
Ity vaovao manaraka ity dia natokana ho an'ny mpamorona rindranasa ho an'ny Mac ary ity herinandro ity dia natokana ho azy ireo ihany koa Safari 10 developer fahatelo beta. Safari 10 developer beta 3 manampy fanatsarana samy hafa ary ny marina dia milaza matetika ny orinasa ny fanatsarana ireo fanavaozana ireo ary ny lisitra dia mahaliana amin'ny resaka fanatsarana fanampiny. Andao hojerentsika izay atolotray antsika amin'ity kinova vaovao ity sy izay ahitsy ankoatry ny lesoka mahazatra sy ny vahaolana amin'ireo olana teo aloha.
Mikasika ny Apple Music, Apple dia manohy mandray dingana kely izay mahatonga ny serivisy fandefasana mozika ho malaza kokoa. Tamin'ity indray mitoraka ity Apple dia nanao a fifanarahana tamin'i Travis Scott hamoaka rakikira vaovao manokana. Mandehandeha be ny Apple Music, fa tsy hanatsara ny endrika sy endrika ivelany fotsiny. Araka ny nambaranay tamin'ny talata lasa teo, misy mpanakanto maromaro izay hanomboka hitendry ny mozikany ao amin'ny Apple Music fotsiny. Toy ny nataon'i Katy Perry teo aloha tamin'ny "Rise" tokana misy azyAnio no anjaran'ny mpanao rap iray vao herotrerony fa malaza sy ankafizina.
Apple dia manohy ao anatin'ny telo ambin'ny folo miaraka amin'ny fihetsika manamboatra ny fomba fandoavam-bola amin'ny finday Apple Pay miely hatrany. Ity herinandro ity dia nofidian'i Apple ho Tonga ny Apple Pay farany ho any France noho izany dia azontsika antoka fa ho tonga ao Espana ao anatin'ny fotoana fohy.
Apple dia nanangana fanentanana vaovao izay rehefa mankany amin'ny iray amin'ireo Apple Store ianao ka mividy kojakoja na vokatra dia inona no hataon'ny mpiasa raha manontany anao ianao raha te handoa amin'ny Apple Pay amin'ny alàlan'ny iPhone na an'ny Apple-nao Jereo. Raha toa ka tsy manana Apple Pay voalamina amin'ny fitaovanao ianao dia hitarika anao amin'ny fizotrany ny mpiasan'ny fivarotana.
Ary izahay dia manidy ny fanangonana androany miaraka amin'ny vaovao fa ny fivoaran'ny macOS Sierra 10.12 manohy mandroso satria manakaiky ny mety amin'ny fanombohana ofisialy ny rafitra vaovao isika. Taorian'ny nahatongavan'ny beta 3 ho an'ny mpamorona tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, Apple nanao beta 2 ho an'ny daholobe ho an'ny mpitsapa voasoratra ao amin'ny Program Apple Beta. Ity beta 2 vaovao ity dia mitovy amin'ny beta 3 ho an'ny mpamorona. Miaraka aminy, manana ny fahafaha-manao ny mpampiasa mifanerasera amin'ny fanatsarana rehetra, ao anatin'izany ny andrana sasany hanamarinana fa ny lesoka tamin'ny kinova teo aloha dia nohamarinina.
Ary hatreto ny fanangonam-baovao amin'ity herinandro ity, dia hahita anao ao anatin'ny hafitoana miaraka amin'ny vaovao vaovao izay azo antoka fa mendrika hotadidina amin'ny lahatsoratra toy izao. Ankafizo ny sisa amin'ny alahady!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Tonga ny kinova farany an'ny OS X, te hifaninana amin'ny MacBook i Xiaomi, ny Apple Pay mavitrika any Frantsa ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro ao amin'ny SoydeMac
Ny iPhone 7 dia hiatrika an'i Apple amin'ny paikady mampidi-doza
iPhone 7: mety ho ny terminal mafy indrindra an'ny Apple